🥇 ▷ Tani waa Xperia 5 ee ka dhanka ah OnePlus 7, Huawei P30 iyo Galaxy S10e ✅
Tani waa Xperia 5 ee ka dhanka ah OnePlus 7, Huawei P30 iyo Galaxy S10e
Hadda oo taleefannada mobiladu ay sii wadaan inay ku koraan si ku saleysan deeqsi ahaan, asxaab yar yar Waxay noqdaan kuwa ka sii muhimsan sidii hore. Waa waxa ay Sony sidoo kale ku sameysay Xperia 5, oo ah nooc ka mid ah wehelka yar ee Xperia 1. Tani, oo dejisay qaabka aadka loo yaqaan ‘panoramic qaab’ casriga 6.5 inji oo kayar sidii caadiga ahayd, ayaa hadda hesha xoojinta, sidoo kale heerar sare.
The Sony Xperia 5 Waa, in kasta oo magaceedu yahay, terminal ay ka guuleysato inta badan himilooyinkii tixraaca, laakiin iyada oo aan wax damac ah lahayn oo ah in la beddelo. Waa, ‘halkii loo yaqaan’ ‘Xperia 1 Compact’ ‘oo aan filan karnay sannadka 2019.
Kala duwanaanshaha ayaa ugu yar oo si gaar ahna ugu xidhan cabirka. Shaashaddeeda, oo hadda ka baxeysa “qaraarka 4K” – oo ahayd qaabkeedii toosan – waxay ku taagan tahay “QHD resolution” oo taagan, ama maxaa lamid ah, 1080p ku dhawaad ​​21: 9. Qaabkan, waa nashqadeyn ka hor tagaysa feejignaan, iyo sidoo kale isticmaalka moodelada motorized nooc kasta.
Gudaha waxaan ku aragnaa isla Snapdragon 855 – waxna kama yara soo hagaageyn 855 + -. Qaddarka xusuusta wali lama xaqiijin, in kasta oo ay u badan tahay in ay isku mid yihiin.
Nuxurka isku mid ah, ‘Compact’ nooca
In kasta oo ay yaraatay cabirka, baytariga ayaa loo yareeyay qaab aad u yar. In kasta oo kii hore aanu ahayn deeqsinimo, haddana wuxuu leeyahay 3,140 mAh oo si dhakhso leh loogu soo celin karo awood ilaa 18 W. Waxay kaloo ilaalisaa biyaha IP58 iyo iska caabbinta boodhka.
Ugu dambeyntiina, qeybta kamaraddeeda waxaan ku aragnaa in kasta oo ay u muuqato inay leedahay ujeedo la mid ah, hadana waxaa jira dareen yar. Lafooraha ugu weyn ee 12 MP ayaa hadda lagu daray mid leh zoom, iyadoo farqiga u dhexeeya waqtigan xajmiga foster uu ka gaaban yahay. Sidaa darteed, waxaan haysanaa dareemayaal u eg aad u diiradda saaraya qaabka sawirka in isticmaalka zoom sida. U buuxi isugeynta xagal ballaaran oo isku mid ah muuqaalka.
shaashadda 6.5 “, OLED, 4K panoramic (1664p), 21: 9 qaab 6.1 “, OLED, FullHD + (1080p), 21: 9 qaab
Miisaan 178 garaam 164 garaam
Xusuusta 64, 128 GB iyo microSD 128 GB iyo microSD
Qolka ugu weyn 12 MP f / 1.6, zoom 2x 12 MP f / 2.4 iyo xagal 12 MP f / 2.4 12 MP f / 1.6, zoom 2x 12 MP f / 2.4 iyo xagal 12 MP f / 2.4
Kaameerada hore 8 MP f / 2.0 8 MP f / 2.0
Durbaan 3,300 mAh, si dhakhso ah u dallacsiinta 18W 3,140 mAh, si dhakhso ah u dallacsiinta 18W
Iska caabin IP68 IP68
Noocyada cilmiga noolaha Qalabka faraha ee sawirka faraha Qalabka faraha ee sawirka faraha
Isku xirnaanta 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, aan lahayn jaakad, GPS, Glonass, Galileo, Beidou 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, aan lahayn jaakad, GPS, Glonass, Galileo, Beidou
Nidaam Android 9 Pie Android 9 Pie
Furitanka Juun 2019 Oktoobar 2019
Qiimaha rasmiga ah 949 euro In la xaqiijiyo
Xperia 5 vs OnePlus 7, Huawei P30 iyo Samsung Galaxy S10e
Qalabkaan cusub ee ‘computeriga ah’ ee Sony ayaa noqon lahaa mid aad u badan haddii uusan ahaan laheyn qaabkiisa, kaasoo wali ku sii nagaan kara soo saareyaasha ugu horreeya Marka, adigu 6.1 inji, oo durba xoogaa yar yar iyadoo loo eegayo heerarka hadda jira, waxay ku dhammaadaan tilifoon aragti ahaan ka fudud oo gacan keliya lagu maareeyo.
Marka laga hadlayo adiga waxqabadka, waxaan aragnaa in dhammaan soo jeedimaha da ‘yarta ah lagu hayo 6 GB ee RAM, 128 GB ee xusuusta aasaaska iyo processor tixraaca. Midkoodna kani waa Snapdragon 855 ee aan ku aragno midka cusub ee Sony iyo OnePlus 7, ama kuwa Huawei iyo Samsung.
Xaddiga sare, noocyada ‘junior’
Waa, si kastaba ha noqotee, qaybta sawirka ah ee wax ka beddelaya soo jeedimaha noocan oo kale ah. Guud ahaan waxay ku jirtaa boosteejooyinka ‘Pro’ badankood – ama ‘Plus’, iyadoo kuxiran astaanta -, halkaas oo aan ku aragno horumarka sawirka oo dhan iyo tirada ugu badan ee dareemayaasha. Xaaladdan oo kale oo la mid ah sida tixraaca ayaa la helay, marka laga reebo farqiga u dhexeeya aragtida xagga zoom aan horay u soo sheegnay.
Inta soo hartayna, waxay haysaa labada Habka aqoonsiga dhinaciisa – Waxkasta oo dareemayaal shaashadda ku jira oo wali ku jira dhamaadka sare ee Xperia-, iyo caabbinta biyaha oo buuxa, ayaa astaan ​​u ahayd calaamadaha taleefannada Sony sannado badan.
Maqnaansho la’aan qiimaheeda weli, sidii ay ku dhacday Xperia 1 oo qaadatay bilo dhawr ah in laga dhigo mid rasmi ah, waxaan rajeyn karnaa oo keliya in tani ay aad uga jaban tahay tan.
Sony Xperia 5 OnePlus 7 Huawei P30 Samsung Galaxy S10e
shaashadda 6.1 “, OLED, FullHD + (1080p), 21: 9 qaab 6.4 “OLED, FullHD + (1080p) 6.1 “19.5: 9 OLED, FullHD + 5.8 “19: 9, OLED, FullHD + (1080p)
Cabbirka 68 x 158 mm 75 x 158 mm 71 x 149 mm 70 x 142 mm
Adag 8.2 mm 8.2 mm 7,6 mm 7,9 mm
Miisaan 164 garaam 182 garaam 165 garaam 150 garaam
Processor Snapdragon 855, 7nm Snapdragon 855, 7nm Kirin 980, 7nm Exynos 9820, 8nm
RAM 6 GB 6, 8 GB 6 GB 6 GB
Xusuusta 128 GB iyo microSD 128, 256 GB 128 GB + NMCard 128 GB iyo microSD
Qolka ugu weyn 12 MP f / 1.6, zoom 2x 12 MP f / 2.4 iyo xagal 12 MP f / 2.4 48 MP f / 1.7 iyo qoto dheer 5 MP 40 MP f / 1.8, xagal 16 MP f / 2.2 iyo zoom 3x 8 MP f / 2.4 12 MP f / 1.5-2.4 iyo xagal ballaadhan 16 MP f / 2.2
Kaameerada hore 8 MP f / 2.0, geeska 16 MP f / 2.0, ee feejignaan 32 MP f / 2.0 10 MP f / 1.9
Durbaan 3,140 mAh, si dhakhso ah u dallacsiinta 18W 3,700 mAh, 20W dhakhso 3,650 mAh, si dhakhso ah u dallac 22.5W 3,100 mAh, si dhakhso ah u dallaca 15W, ku dallaca bilaa wireless 15W
Iska caabin IP68 – IP53 IP68
Noocyada cilmiga noolaha Qalabka sawirka faraha * Qalabka sawirka faraha ayaa muujinaya muuqaalka, indhaha Qalabka sawirka faraha ayaa muujinaya muuqaalka, indhaha Qalabka faraha ee sawirka faraha
Isku xirnaanta 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, aan lahayn jaakad, GPS, Glonass, Galileo, Beidou 4G (LTE Cat 16), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, la’aantiis, GPS, Galileo, Glonass, Beidou 4G (LTE Cat 21), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, oo aan lahayn jaakad, GPS, Galileo, Glonass, Beidou 4G (LTE Cat 20), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, S Pen, USB C, la’aantiis, GPS, Galileo, Glonass, Beidou
Nidaam Android 9 Pie Android 9 Pie Android 9 Pie Android 9 Pie
Furitanka Oktoobar 2019 May 2019 Abriil 2019 Maarso 2019
Qiimaha rasmiga ah In la xaqiijiyo 559, 609 euro 749 euro 749 euro
Sony Xperia 5 vs Samsung Galaxy Note 10, Xiaomi Mi 9T Pro iyo Oppo Reno 2
In kasta oo laga yaabo inaysan ku jirin fikirkooda marinnada ugu macquulsan ee suuqa, laga yaabee haddii ay xiiseynayaan labadaba qiimaha ay u leeyihiin ama awooddooda wax-qabad. Waxaan sidoo kale isbarbar dhigaa Xperia 5 dhanka ah Galaxy Note 10 –Baaciddeeda aan ahayn ‘Plus’, oo weli ku sii xoogsata tayada dhismaha iyo heerka khibradda; Xiaomi Mi 9T Pro, oo xiiso u leh qiimaha; iyo ugu dambeyntii Oppo Reno 2, oo dhawaan u yimid inuu dalbado tirada sub sare Iyada oo qiime ahaan laga yaabo inay sidoo kale aad u soo jiidasho leedahay.
Sony Xperia 5 Samsung Galaxy Note 10 Xiaomi Mi 9T Pro Oppo Reno 2
shaashadda 6.1 “, OLED, FullHD + (1080p), 21: 9 qaab 6.2 “19: 9, OLED, FullHD + (1080p) 6.4 “, OLED, FullHD + (1080p) 6.5 “, OLED, FullHD + (1080p)
Cabbirka 68 x 158 mm 72 x 151 mm 74 x 156 mm 74 x 160 mm
Adag 8.2 mm 7,9 mm 8,8 mm 9.5 mm
Miisaan 168 garaam 191 garaam 189 garaam
Processor Snapdragon 855, 7nm Exynos 9825, 7nm Snapdragon 855, 7nm Snapdragon 730G, 8nm
RAM 6 GB 8 GB 6 GB 8 GB
Xusuusta 128 GB iyo microSD 256 GB 64, 128 GB, oo aan lahayn microSD 256 GB
Qolka ugu weyn 12 MP f / 1.6, zoon 1.35x 12 MP f / 2.4 iyo xagal 12 MP f / 2.4 12 MP f / 1.5-2.4, 16 MP xagal ballaaran iyo 2x 12 MP zoom 48 MP f / 1.8, zoom 2x 8 MP f / 2.4 iyo xagal 13 MP f / 2.4 48 MP f / 1.7, zoom 13 MP f / 2.4, xagal ballaaran 8 MP f / 2.2 iyo qoto dheer 5 MP
Kaameerada hore 8 MP * f / 2.0, geeska 10 MP f / 2.2 20 MP f / 2.0, mooto 16 MP f / 2.0, in ‘fin’
Durbaan 3,140 mAh, si dhakhso ah u dallacsiinta 18W 3,500 mAh, si dhakhso ah u dallac 25W, ku dallac la’aan wireless 12W 4,000 mAh, si dhakhso ah u dallacsiinta 27W 4,000 mAh, si dhakhso ah u dallacsiinta 20W
Iska caabin IP68 IP68 – –
Noocyada cilmiga noolaha Qalabka faraha ee sawirka faraha Qalabka sawirka faraha ayaa kujira shaashadda, ultrasonic Qalabka sawirka faraha ayaa muujinaya muuqaalka, indhaha Qalabka sawirka faraha ayaa muujinaya muuqaalka, indhaha
Isku xirnaanta 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, aan lahayn jaakad, GPS, Glonass, Galileo, Beidou 4G (LTE Cat 20), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, S Pen, USB C, la’aantiis, GPS, Galileo, Glonass, Beidou 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, Jack, GPS, Glonass, Galileo, Beidou 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, Jack, GPS, Glonass, Galileo, Beidou
Furitanka Oktoobar 2019 Ogast 23, 2019 Ogast 20, 2019 In la xaqiijiyo
Qiimaha rasmiga ah In la xaqiijiyo 959 euro 399, 449 euro Qiyaastii 500 euro